သင့်ရဲ့ခရီးသွားစီစဉ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သင့်ရဲ့ခရီးသွားစီစဉ်
လူတိုင်းဟာကွဲပြားခြားနားခရီးသွားလာဆကျဆံ. တချို့ကပျော်မွေ့ အတှေ့အကွုံ အခြားအဆုံးအပေါ်အချို့သောရုံကြောင့်ရွယ်တူချင်းဖိအားသွားရောက်သို့မဟုတ်စဉ်ကြောင့်ခရီးသွားလာထံမှလာ မိသားစု ဖိအား. မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မှကြွလာသောအခါ ခရီးသွားလာ, နောက်တဖန်လူများကစီစဉ်လိုဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဦးစားပေး၏, သငျသညျအကြာတွင်ကူညီပြီးရင်ဆိုင်ရပါဘူးဒါကြောင့်မကျင့်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအခြို့သောအမှုအရာရှိပါတယ်, ကဲ့သို့ ငါ၏အမီးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန် ကြောင်းကိစ္စသို့မဟုတ်လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ.
ငါကဲ့သို့သောအချို့သောလူများအတွက်သူတို့အသက်တာ၌လိုအပ်မယ့်ကန်နှင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၏စိတ်ဖိစီးမှုကနေဝေးရတဲ့တစ်နည်းလမ်းများခရီးသွားလာ. သို့သျောလညျး, တူသောအမှုကိုပြုရငါကိုကြိုက်ကြောင်းအရာအခြို့ရှိပါတယ် ငါ၏အမီးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် သို့မဟုတ်လေယာဉ်လက်မှတ်တွေကြိုတင်ဒါနဲ့ရနိုင်ကြောင်း တချို့စာချုပ်အွန်လိုင်း ပိုကောင်းစီစဉ်များအတွက်. အားဖြင့် ငါ၏အမီးရထားလက်မှတ် booking အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်ကြောင်းကိစ္စအဘို့ငါလက်မှတ်တွေသို့မဟုတ်နေရာ Non-ရရှိနိုင်မှု၏နောက်ဆုံးအခိုက်အစိတ်ပျက်မိကြောင်းရင်ဆိုင်ရရန်မလိုပါကြောင်းသေချာစေရန်မယ်လို့. တချို့လူတွေကကိုယ့်ချင်ပါတယ် သူတို့ရဲ့အိတ်သယ်ဆောင် နှင့် takeoff. ဤသည်ကိုသာပေါ် မူတည်. ဖြစ်နိုင် ခရီးလမ်းဆုံး သငျသညျခရီးသွားလာနေသောကြောင့်.
သငျသညျတိုင်းပြည်အတွင်းခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, အဆိုပါဖွင့်မယ့်ရထားသို့မဟုတ်တစ်လာပြီ ဘတ်စ်ကားဘွတ်ကင် အဆိုပါကိစ္စများ sort မယ်လို့. အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည် နိုင်ငံများသို့ခရီးသွားလာ အဘယ်သူမျှမဗီဇာလိုအပ်ချက်တနည်းအရပ်၌, သူတို့ဗီဇာ-on-ဆိုက်ရောက်ဟုခေါ်ဝေါ်တစ်ခုခုရှိ. အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ, သင်ရုံစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပြီး လေယာဉ်ပေါ်တက်ရောက် သားအပေါင်းတို့သည်အခြားတရားဝင်သင်သည်သင်၏ရောက်ရှိသည့်အခါစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည် ခရီးလမ်းဆုံး. ခရီးစဉ်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဒါ ခရီးသွားမှတ်တမ်း ဤကဲ့သို့သော, လိုအပ်တာကစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမရှိ. သို့သျောလညျး, စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ဗီဇာအပေါင်းတို့နှင့်တူသောသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ရှိပါတယ်သည့်အခါ. အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကြိုတင်ပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်. အဆိုပါတစ်ဘွတ်ကင်ရှိလိမ့်မည် ရထားလက်မှတ်တွေ, အဆိုပါ booking သင့်ရဲ့ဗီဇာ post နိုင်အောင်ကြိုတင်ကောင်းမွန်စွာပြုကြခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့ကိုစလှေတျနိုငျသညျ. အဆိုပါဗီဇာအတည်ပြုမှသာတစ်ကြိမ်, သင်တို့ရှိသမျှသည်ခရီးသွားဟုသတ်မှတ်ကြသည်. သို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သင်မည်သို့သင့်ရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်ကိုကြိုက်ကြသည်ဘယ်သူကို မူတည်. နောက်ထပ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိမပြုစေခြင်းငှါစေခြင်းငှါ,.
ခရီးသွားလာ - တစ်ဦးစွန့်စားမှု
ခရီးသွားလာ သငျသညျနေရာသစ်ကိုတွေ့မြင်နှင့်အသစ်ယဉ်ကျေးမှုစူးစမ်းလေ့လာမယ့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. ဒါဟာနောက်ထပ်စိတ်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်သေတ္တာအပြင်ဘက်စဉ်းစားရန်ခွင့်ပြု. သို့သျောလညျး, နယ်လှည့်အတူပါလာမသေချာသောပုံမှန်နှင့်န့်အသတ်အစဉ်အမြဲရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဗီဇာနှင့်အခြားသေချာသည်အချိန်အများစုကို ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများ သငျသညျသငျကိစ္စများအတွက်ခရီးစဉ်ဒါမှမဟုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာစတင်ပါသည့်အခါမဆိုစိတ်ပျက်စရာခံယူရန်မလိုပါကြောင်းဒါရာအရပျ၌ရှိကြ၏. ခရီးသွားလာမင်္ဂလာ!
သင်သည်သင်၏ခရီးသွားစီစဉ်ပြုမိကြသောအခါ, အကောင်းဆုံးကိုက်ဘ်ဆိုက်မှ အမိန့်လက်မှတ်များလေ့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဖြစ်ပါသည်
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/planning-your-travel/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, သင် / TR မှ / fr ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ.